Indlela yokwenza iKhadi leAzisi leZithombe kwiMigangatho emihlanu okanye ngaphantsi? - Make.id
Ukuhamba ixesha elide yimihla xa ufuna ikhadi le-ID yekhadi, kufuneka ube neyona nto ephezulu yomgca we-ID yomgca onokukuhlawula amawaka eedola. Ngaphezu koko, kufuneka ufunde indlela yakho malunga neprogram yokuyila imifanekiso ukudala ikhadi ngaphambi kokushicilela. Konke kuzo zonke, kwakudla, ukuchitha ixesha, kwaye akukho nhlobo isiqinisekiso sokuthi ikhadi lokuchonga liya kuba ngumgangatho ophezulu.
Ukukhawuleza iminyaka emininzi kwaye silapha. Namhlanje, ngomgangatho ophezulu ikhadi le-ID yekhadi, awudingi nantoni na. Siyabulela kokubili isofthiwe kunye nentuthuko ye-hardware, kunye nobulumko buntu, ukwenza ikhadi le-ID likhawuleza, lifanelekileyo, lithengeka kwaye lulula. Kwaye ke, imveliso yokugqibela iqinisekisiwe ukuba yinto esemgangathweni.
Ikhadi leSazisi kwimizuzu ye-5 okanye ngaphantsi
Inkqubo ilungile kwaye ilula. Akukho mfuneko yolwazi oluthile lobugcisa okanye ukuyila imifanekiso. Yonke into idinga isitho kunye nolwazi olusezantsi lwekhompyutha. Ukuchaneka enye kufuneka ikwazi ukulayisha ifoto uze uzalise iifom ngeenkcukacha zakho.
Kodwa ngaphambi kokuba ulayishe isithombe kwaye ufake ulwazi lomntu siqu, umsebenzisi ufuna ukhethe kwii-templates ezinikeziwe. Oku kuhle kakhulu kwaye konke kushiywe kukungenisa ikhadi le-ID yomfanekiso wokuprinta. Emva koko, ikhadi liya kuprintwa kwaye lithunyelwe kwidilesi enikeziwe.
Yonke inkqubo; ukhetha ithemplate, ukulayisha umfanekiso, ukungena iinkcukacha zakho ngokuqhelekileyo kuthatha imizuzu ye-5 okanye ngaphantsi. Okokuthi ukuba unganqikazi ukuba yeyiphi imifanekiso oyisebenzisayo okanye yiyiphi itemplate.
Iimpawu eziphezulu zeenkonzo ze-ID ezingcono kakhulu
Kukho amakhulu eenkonzo zeakhadi zekhadi lesimboli sezithombe ezingatholakala kwi-intanethi. Phantse bonke bazithengise ngokwabo njengeyona nto ibalulekileyo kwi shishini. Nangona kunjalo, isahlulo kuphela siwa kwicandelo elikhulu ngelixa abanye bangabonwa njengento engcono kakhulu. Apha sibheka kwiimpawu eziqhelekileyo zeenkonzo ze-ID ezingcono kwi-intanethi:
Umgangatho ophezulu uqinisekisiwe
Iimpawu zabo zee-ID ziza kunye neekhowudi ze-QR
Ziyiholographic kwiziphelo zombini
Bakhetha ukhetho olubanzi lweetemplates
Izixhobo zabo ze-intanethi zilula ukuyisebenzisa
Banobuchule obuninzi bokuhlaziya umsebenzisi
Zikhusela idatha yomthengi
Akukho ubuncinci kumanani amaninzi anokuyalelwa. Enye enye ilungile kakuhle.
Ngakolunye uhlangothi, kukho ezinye iimpawu ezingabhekisela kwinkonzo enokukugxeka kwimali yakho. Ezinye zezona zibalaseleyo zibandakanya izinto ezifana nokubanjiswa kwamahhala (akukho shishini elithembekileyo lingazikhethela ukungabonakali ngokukhululeka kwamahhala), akukho nkonzo yokuxhaswa kwabathengi, ukuvakasha kwabo kubonakala ngathi ababhalwa kubantu bokwenene (ngokuqhelekileyo banayo iinkwenkwezi ezintlanu), kwaye njalo njalo. Eyona nto, yonke into iya kujonga kwaye ilahleke umnxeba.
Kuthiwani malunga nabenzi be-ID benkululeko?
Ewe, naluphi na ukukhangela i-ID yakho okanye ikhadi le-ID yomenzi we-intanethi, kukho iinkonzo ze-intanethi ezinikezela zonke izinto mahhala. Oku kungathi kuzama ukuzama abantu abathile, okanye ubuncinci kwabo bangayazi ibali elipheleleyo.
Kwaye ibali elipheleleyo kukuba akukho nto ikhululekile. Ngokuqhelekileyo baya kukuvumela ukuba usebenzise isofthiwe ye-ID yomenzi-mhlaba ngaphandle kwexesha xa ugubha ngeentengiso kunye ne-pop-ups. Yile ndlela abayenza ngayo imali okanye inxalenye yayo. Emva kokuba uyenziwe ngoyilo uza kusadingeka uprinte ikhadi le-ID yekhadi. Ewe, akusiyo ihhafu. Uya kunikwa ithuba lokuvumela ukuba liprintele lona, ​​ngemali ethile. Okanye ungayilanda kwaye ufumane inkonzo yokushicilela yakho. Kukho nawuphi na, akunjalo njengenkululeko ngaphandle kokupapashwa.
Eminye indlela yokwenza i-ID yabenzi be-intanethi
Eyona ndlela yodwa kwi-ID yomenzi we-intanethi uqhagamshelana namashishini wokushicilela, ukufumana iziboniso zamahhala, nokufumana isofthiwe yokuhlela okanye ukuqeshisela umyili wemifanekiso ukuphatha yonke into kuwe. Ukwenza konke okuya kuziva ngathi uhamba ngamanyathelo amaninzi emva koko, kodwa kuya kuba yindleko yokuchitha ixesha kunye nokubiza kakhulu.
I-Intanethi Umenzi we-ID uphakeme kunanoma yisiphi isisombululo. Kulula, kufikeleleka, kwaye konke kuthatha imitha emihlanu yexesha lakho. I-downside kuphela ixesha lokunikezela elixhomekeke kwiinkonzo zeposi.